Ukufika ngokungxamisekileyo kwe-Delta: Ukukhwela abakhweli kunye nokubetha emnyango we-cockpit
Ikhaya » Iindaba zeenqwelo moya » Ukufika ngokungxamisekileyo kwe-Delta: Ukukhwela abakhweli kunye nokubetha emnyango we-cockpit
iintsuku 7 eyadlulayo
Ukufika ngokungxamisekileyo kwe-Delta
Inqwelomoya i-Delta engu-386 esuka eLos Angeles International Airport yanyanzelwa ukuba ifike ngokungxamisekileyo xa isendleleni eya eNashville emva kokuba umgibeli ezama ukungena kwi-cockpit.
Abakhweli bangs emnyango we-cockpit bekhwaza ukumisa inqwelomoya.
Bobabini abasebenzi kunye nabakhweli batsibela amanyathelo ukubamba umgibeli kwaye bamsa ngasemva kwinqwelomoya.
Umgibeli wasuswa xa ukubekwa okungxamisekileyo kwenziwa eNew Mexico.
Emva kokuba inqwelo-moya isihambile, le ndoda yabalekela kumnyango wenqwelo moya yaqala ukuyibetha, kuthiwa ikhwaza ithi "Misa inqwelo-moya!"
Abakhweli kunye Abasebenzi beDelta wayibeka phantsi indoda, wakhusela iinyawo nezandla ngezibophelelo ze-zip, kwaye wahanjiswa ngasemva kwinqwelomoya de kwagqitywa ukufika kongxamiseko.
Inqwelomoya yenza i ukufika okungxamisekileyo eAlbuquerque emva koko i-FBI yadibana nenqwelomoya yamsusa umkhweli eyazisa apho "akukho songelo kuluntu ngeli xesha."
UJessica Robertson, igosa eliyintloko lomxholo weTogethxr, wayekulo moya kwaye wathumela umyalezo kuTwitter: “Bendikule nqwelomoya kumqolo wesithathu - ndingqina kuyo yonke into. Uyoyikeka kodwa umqhubi wenqwelo moya wethu @Delta uChristopher Williams uthathe amanyathelo ngokukhawuleza. ”
“Enkosi kubasebenzi kunye nabakhweli beDelta Flight 386, i-LAX eya eNashville (BNA), abathe banceda ekubambeni abakhweli abangalawulekiyo njengoko inqwelomoya yayiphambukela eAlbuquerque (ABQ). Inqwelomoya ihlale ngaphandle kwesigameko kwaye umkhweli ususwe ngabezomthetho, ”utshilo uDelta kwingxelo, I-CBS Los Angeles ibike.
Indlu ye-Ocean House kwihotele yeWatch Hill: Izitepsi ezinkulu ezikhokelela ndawo
iiyure 17 eyadlulayo